धर्म-संस्कृति Archives - Page2of 20 - Ukali Orali
सुत्ने बेला पशुपति नाथ मन्दिरको दर्शन गरि भोलिको राशिफल पढ्नुहोस् ।
डोलेश्वर महादेव : मनले मागेको पुरा हुने, अलौकिक डोलेश्वर मन्दिर
काठमाडौंबाट सूर्यविनायक गणेशमन्दिरतिर लाग्ने मोड भक्तपुरको पहिले ट्रलिबस रोकिने ठाउँसम्म पुगेर त्यहीँबाट सिपाडोल जान बस समाएर सूर्यविनायक गणेशमन्दिरको बायाँतिरबाट पन्ध्र मिनेट जत्तिकै बिमला नाम गरेको खोलावारी सिपाडोल बसपार्क पुगिन्छ। त्यहाँबाट पूर्वतर्फको कच्ची सडक हुँदै पैदल तल ओर्लेर बिमला खोलामाथिको पुल तरेर उकालो लगभग आधा घन्टा हिँडेपछि डोलेश्वर मन्दिर भेटिन्छ। डोलेश्वर महादेव विशाल कालो पत्थरको शिवलिङ्ग… Read More »
दक्षिणकाली मन्दिर : किंम्वदन्ती अनुसार दक्षप्रजापतिको तेत्तिसकोटी कन्या मध्ये एक दक्षिणकाली
दक्षिणकाली मन्दिर राजधानी काठमाडौंबाट २२ किलोमिटरको दुरीमा दक्षिण भेगमा अवस्थित रहेको छ। उक्त मन्दिरलाई कालीदेवीको मन्दिर पनि भनिन्छ । मन्दिर राजा प्रताप मल्लद्धारा निर्माण गरिएको हो। चारैतिर हरियालीले सजिएको यो मन्दिर दुई नदीको दोभानमा रहेको छ। मन्दिरमा कालीको मूर्तिबोहक अन्य देवी देवताको मूर्ति छन्। भनिन्छ,यहाँ राजाहरू पनि प्रत्येक वर्षको वैशाखमा आफ्नो देवाली मनाउन आउँथे। मन्दिरमा… Read More »
तपाइले गरेका यि १० महापापहरू भगवानले कहिल्लै माफ गर्दैनन् । जानिराख्नुहोस्
एजेन्सी । मानिसले जान अन्जानमा धेरै पापहरू गरिरहेको हुन्छ । यस्ता केही पापहरू पनी छन् जुन पाप गर्यो भने भगवान स्वयमले पनी माफ गर्दैनन् । महाभारतमा जेठा पाण्डव पुत्र युधिष्ठरले पितामह भिष्लाइ सोधेका थिए । मानिसले कस्ता कस्ता काम गर्न हुन्छ कस्ता काम गर्न हुन्न ? कस्ता काम गर्दा के हुन्छ? र मानिसमा कस्तो स्वभाव… Read More »
काठमाडौं / धर्मशास्त्र अनुसार आइतबारको दिन निकै महत्वपुर्ण दिन हो । यस दिन गरेको कार्यहरु सफल हुने बिश्वास पनि गरिन्छ । खासमा शनिबार धेरै धार्मिक कामहरु पनि हुने गर्छन् । आइतबार धेरै मानिसहरु भगवानको दर्शन गर्न मन्दिरमा जनो गर्छन् । आइतबार शनि देवको दिन पनि भएकोले यस दिन शनि देबको पनि पुजा गरिन्छ । शनिदेबलाई… Read More »
शिव पुराणका अनुसार एक पटक देवी पार्वती महादेवलाई पतिका रुपमा पाउन भनि घोर तपस्यामा थिइन् । उनको तपस्याको तेज यतिधेरै थियो कि देवलोकमा बसेका देवताको समेत सिंहासन डगमगाएको थियो । जसका कारण देवता भयभीत भए । यसरी देवलोक सिंहासन डगमगाएपछि सम्पूर्ण देवता यस समस्याको समाधान खोज्न तर्फ लागे । तर समुन्द्र देव भने देवी पार्वतीको… Read More »
घरमा के को फोटो राख्ने के को नराख्ने यसको बारेमा बास्तुशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । यदि तपाईको घरमा पनि श्रीमान श्रीमतीबीचमा मनमुटाव हुन्छ भने सुत्ने कोठामा यी ५ फोटोहरु राख्नु पर्छ ।१. यदि श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा तनाव उत्पन भईराख्छ भने आफू सुत्ने कोठामा राधा कृष्णको फोटो राख्नुपर्छ २. यदि आफ्नो घरमा झगडा नपरोस् र… Read More »
आज शनिवार, शनिबारको दिनमा शनिको दशालाई हटाउन सं;कटा मन्दिरमा पुजा-आजा गर्नाले ग्रहशान्ति हुने विश्वासका साथ फागुन १० गतेको राशिफल पढ्नुहोस
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) नोकरीमा पदोन्नती हुनेछ भने सुगम स्थानमा स्थानान्तरणको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । सन्तानको सुखमा मन रमाउनेछ भने आध्यात्मिक तथा धार्मिक क्षेत्रमा समय खर्चनु पर्दा मन प्रशन्न रहनेछ । अध्ययन अध्यापन तथा खोज मुलक क्षेत्रमा सफलता हात पार्न सकिनेछ भने राज्यबाट सम्मानि हुने ग्रहयोग रहेकोछ । प्रेमका बाटाहरु फराकिला हुनेछन् भने जीवन साथीको पनि सहयोग… Read More »
धन प्राप्ती, आपतविपत दुर्घटनाबाट बचाउने, जुनसुकै सङ्कट परे पनि समाधान हुने ‘गाईखुरा महादेव मन्दिर’ एकपटक दर्शन गर्न अवस्य पुग्नुहोस !
दोलखा मेलुङ्ग गाउँपालिका–२ सुकाठोकरमा रहेको प्रसिद्ध गाईखुरा महादेव मन्दिरसम्म यातायात सञ्चालनमा आएसँगै भक्तजनको भीड लाग्न थालेको छ । सडक सञ्जालदेखि टाढा रहेको दोलखाकै प्रसिद्ध गाईखुरा महादेव मन्दिरसम्म स्थानीय तहको संरचनासँगै सडक यातयातले जोडिएका कारण हाल मन्दिरमा भक्तजनको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै आएको मन्दिरका पुजारी शिवहरि पण्डितले बताउनुभयो । पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा समेत विकास भइरहेको गाईखुरा महादेव… Read More »
महाशिवरात्रिमा यी ५ राशिका व्यक्तिमा छ महादेवको विशेष कृपा, तपाईको राशि कुन हो पढ्नुहोस ?
महाशिवरात्रिका दिन भगवान महादेवको पूजा आराधना गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। शिवको पूजा गर्दा जीवनमा सुख समृद्धि आउने विश्वास गरिन्छ। भगवान शिव भक्तसँग छुट्टै प्रशन्न हुने धार्मिक विश्वास छ। त्यसैले महाशिवरात्रिमा भक्तजनले भगवान शिवलाई प्रसन्न गराउन विभिन्न उपाय अप्नाउने गर्दछन्। यस महाशिवरात्रिमा केही राशिका लागि भगवान शिवको विशेष कृपा प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। ज्योतिष… Read More »